Home / What to do After MBA?
MBA တက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါ သင်ကိုယ်တိုင် သင့်ကိုယ်ကို မေးမိလိမ့်မယ်၊ ဒါမှ မဟုတ် လူအများစုက သင့်ကို မေးကြလိမ့်မယ်။ “အချိန်တွေ ငွေတွေများစွာ ရင်းပြီး တက်ရောက်လိုက်တဲ့ ဒီ MBA ပြီးတဲ့ အခါ ဘာလုပ်မှာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးပေါ့။
MBA ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဟာ ဘာလုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရရင် သူ့အတွေ့အကြုံ သူ့အရည်အချင်းအပေါ် မူတည်ပြီး “အများကြီး လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်” လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ MBA ဆိုတာ “versatile and valuable” ဖြစ်တဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုလို့ ခေါ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Interest အပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ့် career မှာ လမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာ ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဆိုတော့ MBA ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့အများစု ဘယ်လို လမ်းကြောင်းတွေမှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြလေ့ရှိလဲ?
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Career Options တွေ ရှာဖွေ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။
ဒါကတော့ MBA Degree ကို ပိုင်ဆိုင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုးတက်မှုကို လိုလားကြသူတိုင်းက ကိုယ်က ဘယ် အဖွဲ့အစည်း ဘယ်နေရာမှာဆို ကိုယ့် potential က မြင့်တက်လာနိုင်လဲ၊
Career Development ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်နိုင်လဲ ဆိုတာမျိုးတွေကို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့် MBA Graduate တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ လက်ရှိ Career ထက်ပိုကောင်းအောင် ဘယ် Pathway ကို လျှောက်ရမလဲ?
Senior Management Level ကနေ Executive Level တစ်ခု အထိ တက်ရောက်လိုတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် ဘယ်လို Position မျိုးက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော တိုးတက်မှုတွေကို support လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ စတဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ စဉ်းစားရမယ့် အချိန် ရောက်ရှိလို့လာတာပါ။
MBA graduate တစ်ဦးအတွက် Pathway တိုင်းမှာ Option တွေရော Chance တွေရော ပိုမို များပြာတာကြောင့်
အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးကို သေချာ စဉ်းစား ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။
လုပ်ငန်း တစ်ခု ထူထောင်ကြတယ်။
ကိုယ်က ပြည့်ဝလုံလောက်တဲ့ ပညာရေး အခြေအနေတစ်ခု ရှိပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် ဝါသနာကို အရင်းခံပြီး Career တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုကို ထူထောင်ဖို့ ဆိုတာ အရမ်းကြီး ခက်ခဲလှတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Financial Times သတင်းစာရဲ့ စစ်တမ်းအရ ၂၀၁၅ က စတင်ပြီး MBA ဘွဲ့ရပြီးနောက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ကြတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၂၂ % ထိ တိုးလာခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။
ဆိုတော့ သင့်မှာသာ ယုံကြည်ချက် အပြည့်ရှိခဲ့ရင် ဒီလို အချိန်ကနေစပြီး Entrepreneur တစ်ယောက်အဖြစ် စတည် ခြေလှမ်းဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Skill အသစ်တွေ ထပ်မံလေ့လာကြတယ်။
MBA Program တိုင်းလိုလိုက ဘာသာရပ်တွေကို သီအိုရီကျကျ သင်ကြားပေးနိုင်ကြတဲ့အပြင် တခါတရံ လက်တွေ့ပါ သင်ကြားပြသမှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလို Marketing, Finance, Management စတဲ့ Field အမျိုးမျိုးမှာ စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြားပြသမှုတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တတ်မြောက်သွားကြပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အနာဂတ်မှာ Management ပိုင်းဆို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရတော့မယ့် Professional တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ တက်မြောက်ထားတဲ့ အခြားသော Personal Development skill တွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် Self-Development ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ယူကြတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီလို လိုအပ်တဲ့ Skill Development တွေကိုမှ သေချာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ နေရာတွေမှာ Short Course တွေ လိုက်လံ တက်ရောက် သင်ယူတာမျိုးတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် အချိန်ယူ စဉ်းစားခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။
တခါတလေ ဘဝမှာ ရွေးချယ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေထက် ရွေးချယ်စရာတွေ များပြားလွန်းလှတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာက ပိုပြီး ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။
ဒီလို ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုကို အချိန်တွေ ငွေကြေးတွေပေးဆပ်ရင်း စိတ်ရောလူပါ အပင်ပန်းခံခဲ့သမျှက နောက်ဆုံး အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ ဒီထက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ အခြေချဖို့က သင့်အတွက် အချိန် တစ်ခု လိုကိုလိုအပ်နေပါပြီ။
ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်လို အခြေအနေ အထိ ဆက်လျှောက်မှာလဲ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ဆက်လျှောက်မှာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ဖို့ စိတ်ရော လူပါ အရင် အနားယူပါ။ အချိန်ယူပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
ဆိုတော့ MBA ဘွဲ့ရ သွားရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အနှစ်ချုပ် ပြန်ဖြေရရင်တော့ “A Lot” (အများကြီးပါ) ဆိုတဲ့ အဖြေ အပြင် မရှိတော့ပါဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဘာတွေ လုပ်လေ့ ရှိကြတယ် ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပေမယ့် MBA ဘွဲ့ရ တစ်ဦးအနေနဲ့ သင့် ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်မှုက သင့် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ။
“Every accomplishments starts with the decision to try” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်မှု များစွာကို ရယူနိုင်ကြပါစေ။